SAROKAR: गोरामुमोदेखि गोजमुमोसम्म :फेरि मल्टिकम्प्लेक्स, हाइटेक स्ट्याण्ड र उच्छेदको सवाल
गोरामुमोदेखि गोजमुमोसम्म :फेरि मल्टिकम्प्लेक्स, हाइटेक स्ट्याण्ड र उच्छेदको सवाल
कालेबुङ नगरको तीन पिलो हो, नगरको मैला, अव्यवस्थित ट्राफिक र मल्टिकम्प्लेक्स-हाइटेक स्ट्याण्ड। मैला टिस्टामा फ्यॉंकेर समाधान गरिएको छ। ट्राफिक, त्यसरी नै चलिरहेको छ, जसरी चलेको थियो। अहिले मल्टिकम्प्लेक्स-हाइटेक स्ट्याण्ड र नोभेल्टी परिसरका 35 परिवारको उच्छेदको प्रश्नबिचको समस्या बोकेर उभिएको छ प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरू।
हिजो प्रशासनिकपक्ष बसेर नोभेेल्टीसामु मॉं सन्तोषी टोलमा मल्टिकम्प्लेकस बनाउने र आजदेखि कामै थाल्ने निर्णय गरिएको थियो। आज झरीको कारण काम भएन। विधायक डा. हर्कबहादुर छेत्रीले भनेका छन्‌, मल्टिकम्प्लेक्स र हाइटेक स्ट्याण्ड कालेबुङको आवश्यकता हो। कालेबुङको विकासको निम्ति टोलबासीले प्रशासनिक निर्णयलाई मान्नैपर्छ।
यस्तो निर्णय गर्ने प्रशासनले तर टोलवासीको करएा भने सुनेको छैन। टोलबासीले भनिरहेको छ, ठाउँ छोड्‌नैपर्ने हो भने उच्चाधिकारीले 37 परिवारलाई पुनर्वास गर्ने सरकरीरुपको लिखित पत्र हामीलाई दिनुपर्छ। तर यो कुरादेखि पर पर परेको प्रशासनले विधायक, नगरपालिका र महकुमा प्रशासनले घरिघरि बैठक गरेर कामै थाल्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयलाई हुकूमजत्ति नै घोषणा गरिएकोले अब मल्टिकम्प्लेक्सको मल्टिसमस्या सार्वजनिक हुने पुरापुरी सम्भावना बढेको छ। प्रशासनले जुन घरहरूलाई हटाउने भन्दैछ, ती घरका सदस्यहरूलाई लिएर कुनै बैठक गरेको छैन। सबैभन्दा ठूलो समस्या यहीँ छ। यहीँ छ प्रशासनिक ढलिमलि पनि। अहिले टोलवासी भन्दैछन्‌, कहॉं मल्टिकम्प्लेक्स र स्ट्याण्ड बनाउने हो हामीलाई थाहा नै छैन। हल्ला मात्र सुनिँदैछ। प्रशासनले आजदेखि काम थाल्ने भनेको कुरा पनि उनीहरूलाई थाहा छैन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङले दुइपल्ट टोलवासीसित कुराकानी गरेका हुन्‌। तिनले टोलवासीको समस्या अघि चुडान्त निर्णय गर्न सकेनन्‌। तिनले मोर्चाको महकुमा समितिलाई कुरा मिलाउने जिम्मा दिएका थिए। महकुमा समितिले अनेकौंपल्ट बैठक गर्‍यो। तर उच्चाधिकारीले सरकारीरुपको पुनर्वासको लिखित आश्वासन दिने कुरा आएपछि सेलायो। यसै पनि टोलवासीले न्यायलयमा जमीनको मालिकाना अधिकारको दाबीमा मुद्दा दर्ता गरेका छन्‌। जबसम्म न्यायलयले कुनै निर्णय सुनाउँदैन तबसम्म कुनै पनि जण्डा प्रशासन, बुद्धिजीवी विधायक र प्रौड नगरपालिका अध्यक्षले हस्त7ेप गर्न मिल्दैन। जबरजस्ती गरिएमा धेरै असुविधाहरू उपार्जन हुनसक्ने सम्भावना व्यापक छ। किन भने 37 परिवारको उच्छेदन र पुनर्वासको सवाल यो विकाससित जोडिएको छ। यति ठूलो परिवारलाई उच्छेद गरेर कालेबुङको विकास गरिने हो कि ठोस समाधानको बाटो निकालिने हो, निश्चित छैन। तर कुनै पनि हुकूमी निर्णयले भने मल्टिक्प्लेक्स र स्ट्याण्ड बनिने सम्भावना छैन। निम्ति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले तयार पारेको यो एउटा ठूलो योजना हो, जसको लागत 27 करोड रहेको छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु हो भने लगभग 37 परिवारलाई हटाइनुपर्छ। नहटाइए योजना शुरू हुन सक्दैन अनि योजना शुरू नभए मोर्चाको योजना काम लाग्दैन। नोभेल्टी छेउको मॉं सन्तोषी टोल, जहॉं गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा कालका नगराध्यक्ष सीके कुमाइले शुरू गरेको थियो मोटर स्ट्याण्ड। पुरा नभएको स्ट्याण्ड त्यहीँ छ। स्ट्याण्ट त पूर्ण हुन पाएन तर मोठ तीन परिवार भने त्यही स्ट्याण्डको कारणले त्यसबेला नै उच्छेद हुनुपरेको थियो। कुमाई कालमा बनिएको कम्प्लेक्स आधा कल्चो छ अनि त्यसै ठाउँलाई देखाएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले पनि तयार पारेको छ मल्टिकम्प्लेक्स अनि उच्चस्तरीय स्ट्याण्डको योजना।
न्यायपालिको निर्णय नै सर्वोपरी-टोलबासी
कालेबुङ, 10 अप्रेल।
महकुमा पुस्तकालयको तल्लोपट्टि नोभेल्टी परिसरका 37 परिवारलाई सार्न मल्टिकम्प्लेक्स स्टोरेजको निम्ति आजदेखि भित्ता खन्ने काम शुरू हुने भनेको भएपनि मौसमको कारण आज काम शुरू भएन। ‘हामीलाई उच्छेद गर्नु परमेश्वरलाई पनि मञ्जुर छैन’-क्षेत्रबासीहरूले भने। 35 परिवारलाई मल्टिस्टोरेजमा सारेर उक्त क्षेत्र खाली गराइकन 27 करोडको लागतमा मोटरस्ट्‌याण्ड निर्माण गर्ने विभागले पहल शुरू गरिसकेको छ। यो निर्णय क्षेत्रबासीले मान्नैपर्छ भनेर विधायक डा. हर्कबहादुर छेत्रीले भनेकाले क्षेत्रबासीहरूले साह्रै मन दुखाएका छन्‌। ‘बल्ल यसपल्ट बुद्धिजीवि नेता भेटियो र उनले हामीलाई हाम्रो मालिकाना हक दिलाइदिन्छन्‌ भन्ने हामीले सोँचेका थियौं। तर यस्तो भएन। उनले हाम्रो आशाको ठीक विपरित कार्य गर्दै जमिन छोड्‌ने निर्णय मान्नैपर्छ भने।’-क्षेत्रबासीहरूले आज विधायकप्रति यसरी गुनासो पोखे।
अब विभाग अनि विधायकबाट आशा मारिसकेको क्षेत्रबासीहरुले केवल न्यायपालिको निर्णय नै सर्वोपरी रहने बताए। विधायक डा. हर्कबहादुर छेत्रीले उनीहरूको कागजपत्र न्यायसङ्गत नरहेको हिजो बताएका थिए। ‘हामी यहॉं 70-80 वषर्र्अघिदेखि रहँदै आएका छौं। तरपनि हाम्रो कागजपत्र नहुँदा नै हामीले उच्च न्यायलयमा जमिनको मालिकाना हकको निम्ति मुद्दा दर्ता गरेका हौं-क्षत्रबासीहरूले नाम नलेखिदिने शर्तमा भने। उनीहरूले भने, यदि न्यायपालिकाको निर्णय हाम्रो पक्षमा आएन भने हामी बिनाशर्त जमिन खाली गरिदिन्छौं। तर यदि न्यायपालिकाको निर्णय आफूहरूको पक्षमा आए उनीहरू एक इञ्च पनि जमिन छोड्‌ने पक्षमा छैनन्‌। स्मरण गराइन्छ, गत वर्षको जून महिनामा मॉं सन्तोषि टोलका 37 परिवारलाई जमिन खाली गर्ने नोटिस नगरपालिकाले दिएको थियो। त्यसैबेला उनीहरूले आफूहरूलाई जमिनको मालिकाना हक दिनुपर्ने भन्दै उच्च न्यायलयमा मुद्दा दर्ता गरेका छन्‌। यसैले मुद्दा छिनाफाना नभइकन आफूहरूलाई उठाए यो गैरकानुनी हुने क्षेत्रबासीहरू बताउँछन्‌। विधायकले कालेबुङको मूल द्वारमा नै झोपडपट्टी भन्दै कालेबुङको सुन्दरतामाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए।
‘यदि हामीलाई यहॉं पक्का घर बनाउने अनुमति भएको भए सायदै हामी पक्का घर बनाउने थियौं’-उनीहरूले भने। किचडबाट थुप्रै कमलहरू फुलिसकेको क्षेत्रबासीले उदाहरण दिँदै यहीँबाट विद्यार्थीहरू पाइलट, इन्जिनियर, कालेबुङ टप्पर आदि भइसकेको बताए। उनीहरूले झोपडपट्टीमै बसेर पनि अवैद्य धन्दा नगरेको भन्दै स-सानो व्यवसायबाट जीविका चलाइरहेको बताए। घुम्दै फिर्दै रुम्झेटार भन्दै मोटर स्ट्‌याण्डको निम्ति विभागले नोभेल्टी परिसर नै देखेकोमा पनि क्षेत्रवासीहरू आशचर्यचकित छन्‌। नोभेल्टी परिसरमा मोटर स्याण्ड निर्माण गरेर कालेबुङको ट्राफिकको समस्या पूर्ण रूपमा सामाधान नहुने दावी गर्दै उनीहरूले भने, विभागले यस्तो ठाउँ खोज्नुपर्छ जहॉं मोटर स्ट्‌याण्ड बनाएपछि कम्तिको पनि 50-60 वर्ष टाउको दुखाउन नपरोस्‌।
पीडब्ल्यूडीलाई जमिन माग्दै पत्रचार
महुकुमा पुस्तकालयको तल्लोपट्टिको जमिन कालेबुङको जनहीतको निम्ति भन्दै मल्टिस्टोरेज कम्पल्ेक्स बनाउ कालेबुङ नगपालिकाले पीडबल्यूडीलाई मागेको छ। उक्त 0.125 एकेर जमिन माग्दै कालेबुङ नगरपालिकाले सचिव पीडब्ल्यूडी कोलकातामा पत्रचार गरेको छ। नगरपालिका पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्टबाट नगर पार्षदिका ज्योति राईले कालेबुङको ट्राफिक समस्या समाधानार्थ नोभेल्टी परिसरमा मोटर स्याण्ड निर्माणको निम्ति अघिबाटै राशि अडि्‌कएर बसेको बताइन्‌। मौसम सही हुनेबित्तिकै यहॉं मल्टिस्टोरेज निर्माण कार्य थालिने बताउँदै मोटर स्ट्‌याण्ड अनि मल्टीस्टोरेज कम्प्लेक्स दुवै दागोपाप अधिनस्त बनिने अनि पछिबाट नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिने बताइन्‌। नोभेल्टी परिसरामा केवल 33 वटा दोकानहरू भएपनि चारतल्ले मल्टिस्टोरेजमा 60 वटा दोकानहरू हुने नगर पार्षद रवि प्रधानले बताए। यी दोकानहरू नोभेल्टी परिसरका 33 परिवारलाई कागजपत्रसहित हस्तान्तरण गरिने पनि तिनले बताए। यी परिवारहरूलाई उच्चेद गर्न नचाहेको अनि यो सम्पूर्ण कालेबुङको हीतको निम्ति उनीहरूलाई आफ्नो दोकान माथिल्लोतिर राम्रो व्यवस्था मिलाएर स्थान्तरण गरिने प्रधानले बताए।
गोरामुमोको पालामा बनिएको आधाकल्चो स्ट्याण्ड र कम्प्लेक्सलाई भत्काएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले नयॉं कम्प्लेक्स र स्ट्याण्ड बनाउने हो कि त्यसैमाथि थपथाप गर्ने हो खुलिएको छैन। तर 27 करोडको योजना रहेको भने खुलिएको छ। टोलवासीसित यो विकासको निम्ति प्रसासनिक सहमति भएको छैन। सहमति बिना नै कार्यथाल्ने हो भने विवाद चर्किने व्यापक सम्भावना छ। अहिले जुन मल्टिकम्प्लेक्स र उच्चस्तरीय स्ट्याण्ड बनाउने कुरा चलिरहेको छ, त्यस क्षेत्रका सचेतहरू अनुसार यो खपाउ योजना होइन। किन भने कालेबुङमा बढिरहेको वाहनहरूको संख्यालाई याद गर्नु हो भने सानो ठाउँमा सॉंघुरोरुपले बनाइएको मोटर स्ट्याण्ड र कम्प्लेक्स पर्याप्त हुने छैन। अहिलेको जुन संख्या वाहनहरूको देखिएको छ, ती वाहनहरूलाई व्यवस्थित गर्न पनि स्ट्याण्डको ठाउँ पर्याप्त हुने छैन। यसो हो भने यो योजना भविष्यको निम्ति कसरी भयो त? प्रश्र्न क्षेत्रवासीसित यस्तो रहेको छ। उनीहरू अनुसार कुनै ठूलो क्षेत्रमा यो योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ता कि त्यो योजना भविष्यको निम्ति उपयोगी होस्‌। जे होस्‌, क्षेत्रवासीसित आएको सहमतिले नै मोर्चाको योजनाको भविष्य पनि तोक्ने देखिएको छ। अहिलेसम्म सहमति हुन नसक्नुमा क्षेत्रवासीको सुरक्षा र उनीहरूलाई प्रदान गरिनुपर्ने सहुलियतहरूबारे आइरहेको नितान्तै अस्पष्ट कुरा पनि मान्न सकिन्छ क्षेत्रवासीलाई लाग्न पर्‍यो कि जुन सहमति र सम्झौता हुन्छ त्यो अक्षरस्‌ पालन गरिनेछ। यता यसै मामिलामा यसै क्षेत्रबाट उच्छेद भएका गोरामुमोबाट तीन र गोजमुमोबाट एक परिवारलाई हेर्दा भने क्षेत्रवासीले प्रशासन र पार्टीलाई ढुक्कले विस्वास गरिहाल्न सक्दैनन्‌। कारण के परेको छ भने चार परिवार यस क्षेत्रबाट पार्टी र प्रशासनको आश्र्वासनहरूको कारण नै उच्छेद भइसकेको छन्‌। उनीहरूलाई दिइएको कुनै पनि आश्र्वासनलाई न त गोरामुमोले न त गोजमुमोले नै पुरा गरेको छ, प्रशासनको त कुरै छैन। बरू प्रशासनले गोरामुमोकालमा बनिएको कम्प्लेक्स एउटा कोठा आठ लाखमा बिक्रि गरेको अपुष्ट समाचार पाइएको छ। 2006 मा गोरामुमोका नगराध्यक्ष सीके कुमाइले पनि यसै ठाउँमा स्ट्याण्ड र कम्प्लेक्स बनाउने योजना बनाएका थिए। तर योजना शुरू गर्न अघि त्यस क्षेत्रमा रहेका केही परिवारको घर बाधा बन्यो। फलस्वरुप उनीहरुलाई अन्यत्र सार्ने अथवा बनिएको कम्प्लेक्समा कोठा दिने आश्र्वासनमा कमला प्रधान, जीवन राम अनि पूर्णिमा राईको घर भत्काइयो। हामी त उच्छेद मात्र भयौं, यसकारण यो समस्या आश्वासनले समाधान हुँदैन-उच्छेद मध्येको एकले यस्तो गुनासो गरेका छन्‌। उनीहरू अनुसार6वर्ष बित्यो आश्र्वासनलाई न त पार्टीले पुरा गर्‍यो न त प्रशासनले। अहिले ती चार परिवार नगरपालिका प्रशासनद्वारा उच्छेदित भएर अन्यत्र आफ्नै बन्दोबस्तमा बसोबासो गरिरहेका छन्‌। क्षेत्रवासीले पार्टी र प्रशासन मिलेर तीन परिवारमाथि भएको अन्याय राम्ररी भुल्न पनि पाएका थिएनन्‌ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा र नगरप्रशासनले स्ट्याण्डको मुखैमा रहेको एसयुएमआईका पूर्व शिक्षक रामाशङ्‌कर प्रसादको घर नै भत्काइदियो।
कारण थियो जङ्गबीर सापकोटाका सालिग निर्माण। एउटा परिवारलाई उच्छेद गरेर अहिले जङ्गबीर सापकोटाको सालिग त्यहॉं उभिएको छ। रामाशङ्‌करलाई सापकोटाको सालिग उद्घाटनको दिनसम्म पनि घर भत्काइएको घरको साटो कही व्यवस्था मिलाइने आश्र्वासन दिइएको थियो। पार्टी र प्रशासनले दिएको त्यो आश्र्वासन पुरा भएको हेर्न नपाई रामाशङ्‌कर बिते। तिनको छोरा निरज प्रसादको दाबी अनुसार पार्टी र प्रशासनको अन्यायले उपार्जन गरेको मानसिक प्रताडनाको कारण नै तीनको पिताको मृत्यु भएको हो।
अहिले निरज प्रसाद पनि आफ्नै व्यवस्थामा अन्यत्र नै बसोबासो गरिरहेका छन्‌। यी चार परिवारसित बितेको अन्यायपरक घटना भुल्न नसकेका मॉं सन्तोषी टोलका 37 परिवार मध्ये चार परिवारलाई घर हटाउने नोटिश पीडब्ल्यु विभागबाट आयो। जुन विभागबाट नोटिश आयो त्यो विभागलाई नै थाहा थिएन कि जमीन कसको हो। जमीन नगरपालिका र पीडब्ल्युडीको नभएर बन विभागको रहेको छ। गोरामुमो कालमा होम्स नजिक लिचिग्राउण्डमा वन विभागलाई त्यसको साटो जमीन दिएर त्यहॉं स्ट्याण्ड वा कम्प्लेक्स बनाइने कार्य गोरामुमोद्वारा गरिएको थियो। पुस्तौंदेखि त्यस क्षेत्रका मानिसहरूले एकै खाले परिस्थितिको सामना गर्न परिरहेको छ त्यो हो उच्छेदन। जुनै पार्टी आए पनि आखिर उनीहरूलाई नै उच्छेदनको दवाब आइरहेको छ। अहिले मोर्चालाई बारम्बार क्षेत्रवासीले टार्ने कार्य गरिरहेको छ अनि उनीहरू कुनै पनि निर्णय दिन नसक्ने परिस्थितिमा देखापरेका छन्‌। किन भने क्षेत्रवासी पुर्खौंदेखि स्दै आएको जमीनको मालिकाना हकको निम्ति अहिले लडिरहेका छन्‌। एक विशेष अधिकार अनुसार उनीहरूको माग जायज रहेको छ। तरै पनि प्रशासनले नीहरमाथि कस्तो दवाब दिने हो वा समस्याको समाधान कस्तो निकाल्ने हो, त्यो भने गर्भको विषय नै बनेको छ।
0 comments: on "गोरामुमोदेखि गोजमुमोसम्म :फेरि मल्टिकम्प्लेक्स, हाइटेक स्ट्याण्ड र उच्छेदको सवाल"